Xaragada qorraxda Photovoltaic: sifooyinka, hawlgalka iyo noocyada | Cusbooneysiinta Cagaaran
Qalabka qoraxda ee loo yaqaan 'Photovoltaic solar'
Soo-saarista tamarta qorraxda ayaa loo beddelay boodbood iyo soohdin sannadihii la soo dhaafay iyo horumar farsamo. Labadaba seerayaal waaweyn oo qorraxda ka shaqeeya iyo goobo yar yar oo is-istcimaalo, way la shaqeeyaan alwaaxyada qoraxda sawira. Kordhinta is-isticmaalka ee Isbaanishka ayaa si muuqata u muuqda sanadihii la soo dhaafay. Waana in guryo aad iyo aad u tiro badani ay doorteen rakibidda sawirrada sababo kala duwan awgood. Mid ka mid ah ayaa ah keydinta biilka korontada iyo mas'uuliyadda deegaanka ee waqtiyada la dalbanayo.
Maqaalkani waxaan kuu sheegeynaa dhammaan sifooyinka iyo hawlgalka baararka qorraxda sawir qaade.
2 Sida loo xisaabiyo awoodda qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda
3 Noocyada qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda
4 Meelaha qorraxda ku shaqeeya ayaa fiican
Qaybaha qoraxda ee loo yaqaan 'Photovoltaic solar' ayaa awood u leh inay ku dhaliyaan tamarta korantada qorraxda. Waa tamar gebi ahaanba la cusboonaysiin karo oo aan sinnaba u nijaasaynayn deegaanka. Faa'iidada noocan ah ee tamarta la cusboonaysiin karo ayaa ah taas waxaa si toos ah loogu soo saaraa tamarta ka soo baxda qorraxdayada. Hawlgalka baalayaasha cadceedda ayaa inta badan ku saleysan unugga qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic cell' oo mas'uul ka ah in tamarta qorraxda si toos ah loogu beddelo koronto iyadoo la adeegsanayo tamarta koronto-dhaliyaha.
Tamarta Photovoltaic waa hantida ay alaabooyinka qaarkood leeyihiin awood u yeelan karaan inay soo saaraan koronto markii ay ku dhacaan shucaaca qoraxda. Tani waxay dhacdaa marka tamarta qorraxda ay sii deyso elektaroonig si ay u abuuraan socodka tamarta korantada.
Qalabka qoraxda wuxuu ka kooban yahay unugyo taxane ah oo taxane ah. Waxay yihiin lakabyo silikoon ah oo ka kooban fosfooraska iyo boron oo abuuri kara koronto markii ay helaan shucaaca qoraxda. Waxay awood u leeyihiin inay ku dhex-dhex-galaan module-ka si markaa danabku loogu hagaajiyo nidaamka DC-ka ee la isticmaali karo.
Tamarta ka dhalata ku xirnaanta inverter-ka hadda jira ayaa loo beddelaa mid kale oo loo isticmaali karo qalabka guriga. Waa wax caadi ah inuu noqdo moduleka danab waxaa lagu hagaajin karaa nidaamyada hadda socda iyo kuwa is-beddelaya labadaba. Dhammaan isbeddelka hadda jira waa habka tamarta la isticmaalo inta lagu jiro maalinta waxaana lagu bixin karaa baararka qoraxda.
Waa in lagu xisaabtamo in danabku ay bixiyaan unugyada sawir-qaadeyaashu had iyo jeer yahay mid joogto ah oo toosan, sidaa darteed qadarka hadda la bixiyaa waxay kuxirantahay xoogga qorraxdu u ifto. Tani waxay ka dhigeysaa waxqabadka ay qoraalladu qoraxda siinayaan sidaa darteed sawir-qaadeyaasha waxay inta badan ku xiran tahay xoogga iftiinka. Tani way kala duwan tahay waxayna kuxirantahay waqtiga maalinta, waqtiga sanadka iyo cimilada meesha aan joogno.
Sida loo xisaabiyo awoodda qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda
Waa lagama maarmaan in la xisaabiyo awoodda korantada ee qoraxda sawir-qaadaha si loo awoodo in loo xisaabiyo awoodda moduleka. Marka ay timaado imaatinka ama xisaabinta waxqabadka qaybaha, cabirka loo adeegsaday modules-ka waa watts peak (Wp). Cabbiraaddan waxaa loo adeegsadaa tixraac u adeegta si loo cabbiro waxqabadka baalayaasha qorraxda iyo in la sameeyo isbarbardhigyo u dhexeeya iyaga. Sidan oo kale, waxaan ku ogaan karnaa astaamaha mid kasta oo ka mid ah oo aan arki karnaa midka loo baahan yahay waqti kasta. Astaamahan badankood waxay matalayaan waxqabadka ay soo bandhigeen baallayaasha qoraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic solar' qaddarka caadiga ah ee shucaaca iyo heerkulka qorraxda.
Waxaas oo dhan ama waa lagama maarmaan marka la qiyaasayo rakibidda sawir-qaadista, ha ahaato guri ama hay'ad dadweyne. Waa muhiim in la falanqeeyo inta watts ee ugu sarreysa ee la rakibi karo si loo helo awoodda ugu badan ee is-isticmaalka. Waa in lagu xisaabtamo in guryaha dhexdooda isticmaalka korontadu ku kala duwan yahay waqtiga sanadka iyo saacadaha maalintii. Waxaa jiri doona waqti maalin ah oo ay jiraan dhowr qalab koronto oo isku mar isku xiran isla markaana loo baahan yahay koronto ballaaran si loo qanciyo baahida. Dhanka kale, waa inaan sidoo kale tixgalino waqtiga sanadka. Xilliga xagaaga, qayb badan oo tamarta ah ayaa loo baahan yahay in loo isticmaalo qaboojinta guriga.
Markaad xisaabineyso cabbirka iyo waxqabadka rakibidda qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda, dhammaan arrimaha waa in la tixgeliyaa, iyadoo la tixgelinayo aagga juquraafi ahaan iyo jihada iyo xagalka saqafka sare ee la saarayo. Tani waa sida ay suurtogalka u tahay in lagu falanqeeyo isticmaalka wanaagsan iyo rajooyinka laga qabo in la qiyaaso cabbirka rakibaadda ku habboon baahiyaha guri kasta.
Noocyada qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda
Aynu aragno waa maxay noocyada waaweyn ee baallayaasha qorraxda ee maanta dhaca:
Guddiyada Qoraxda ee Amorphous: way sii yaraanayaan isticmaalkoodana waxaa lagu gartaa inaysan lahayn qaab dhismeed qeexan. Waxay badiyaa lumisaa waxtar badan oo tamar ah inta lagu jiro bilaha ugu horreeya ee hawlgalka.
Polycrystalline qoraxda: Waxay ka kooban yihiin kristantarro loo jiheeyay si ka duwan oo lagu kala soocay iyagoo leh midab buluug ah. Habka wax soo saarku wuxuu leeyahay faa iidada inuu ka jaban yahay, laakiin waqtiga la isticmaalayo waa wax soo saar yar.
Qalabka monocrystalline qoraxda: Waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin badeecado tayo sare leh maadaama ay leeyihiin unugyo sameysma guddiga oo ka kooban hal kristal silikoon saafi ah oo lagu adkeeyay isla heerkulka. Layrarka cadceedda ku shaqeeya waxay bixiyaan waxtar badan iyo wax qabad tan iyo markii ay u oggolaadaan elektaroonikada inay si xor ah u socdaan. In kasta oo habka wax soosaarku qaali yahay, wax soo saar tayo sare leh ayaa loo soo saaraa si aad u hufan. Waa kadib wixii aad raadineysay oo dhan.
Meelaha qorraxda ku shaqeeya ayaa fiican
Kuwa ugu badan ee lagula taliyay waa kuwa monocrystalline. Amorphous waxay bilaabaan inay noqdaan kuwo duugoobay maadaama ay si dhakhso leh u doonayaan waxtarka. Faa'iidada kaliya ee ay bixiyaan qaybaha loo yaqaan 'polycrystalline' waa qiimo jaban. Habka wax soo saarkeedu waa ka qaalisan yahay, laakiin ma lahan wax-qabad la mid ah kuwa monocrystalline-ka.
In kasta oo qiimahoodu ka qaalisan yahay, taarikada monocrystalline-ku waxay leeyihiin waxqabad sare oo sarreeya, wax-qabad yar oo sarreeya, ayaa ah kuwa kuleylka u adkeysi badan oo qurux ahaanna ka qurux badan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda lagu keydiyo iyo howlgalkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Qalabka qoraxda ee loo yaqaan 'Photovoltaic solar'
Hawlaha muhiimka ah ee dhirta